KNU forest policy (Karen language)
KNU forest policy (Karen language) HOT
The forest policy (Karen language) has goals including local livelihood security, human security, biological and cultural diversity, ecosystem services, sustainable development, people’s participation, public awareness and capacity building. Strategies and tactics for the Forest policy include the creation of community forests, reforestation, afforestation, forest fire control, awareness raising, training and workshops, capacity building, demarcation of reserved forest and wildlife sanctuaries, forest and biodiversity research, increasing skills and human resources, decentralisation and devolution, setting uparegulated forest extraction agency and enforcing rules.
ပြည်သူလူထု၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုံခြုံရေး၊ သက်ရှိမျိုးစိတ်များ ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်ရေး၊ ရိုးရာဓ လေ့ယဉ်ကျေးမှုများ ထိန်းသိမ်းရေး၊ ဂေဟစနစ်ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်ရေး၊ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖွံ့ ဖြိုးမှုပေါ်ပေါက်ရေး၊ လူထု၏ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကိုမြင့်တင်နိုင်ရေး၊ လူထုအ ရည်အသွေးမြင့်တင်ရေး၊ သစ်တော စီမံကွပ်ကဲအုပ်ချုပ်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး လမ်းညွှန်နိုင်ရေး စသည့် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ဤသစ်တောပေါ်လစီ ကို (ကရင်ဘာသာ) ကေအန်ယူသစ်တေဌာနမှ ပြုစုရေးသားထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသစ်တောပေါ်လစီ တွင် သစ်တောလုပ်ငန်းစဉ်အနေဖြင့် အဖွဲ့အစုပိုင်သစ်တောများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ သစ်တောများပြန်လည်စိုက် ပျိုးခြင်း၊ သစ်တောများပျိုးထောင်ခြင်း၊ တောမီးအန္တ ရယ်ကာကွယ်ခြင်း၊ သစ်တောဝန်ထမ်း နှင့်လူထုများ၏ စွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်ပေးခြင်း၊ ဘေးမဲ့တော နှင့်ကန့်သန့်မှုအောက်တွင်ရှိသော သစ်တောများ၏ ဧရိယာနယ်နိမိတ်ကို ပြန်လည်တိုင်းတာမှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ သစ်တောနှင့်သက်ရှိမျိုးစိတ်များကို သုတေသန ပြုလုပ်ခြင်း၊လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာများကို ခွဲဝေပေးခြင်း၊ သစ်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် အခြားသောသစ်တောထွက် ပစ္စည်းများကို စီမံအုပ်ချုပ် ကွပ်ကဲမည့် တရားဝင်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း၊ သစ်တောဥပဒေများပြ ဌာန်းခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းစဉ် များပါဝင်ပါသည်။
Size 333.72 KB